China SBS ukulungiswa ngebhitumene Abenzi inwebu kunye Suppliers | Hongyuan
itha modified ndizayo manzi
SBS itha elungisiweyo inwebu senziwa yokunyakamisa isiseko itha, okanye elastomer thermoplastic (ezifana styrene butadiene-SBS), luqiniswe ipholiyesta okanye fiberglass, wayegqiba ubuso phezulu kunye kwentlabathi ecikizekileyo, zileyiti izimbiwa (okanye iinkozo) okanye ipholithini ndizayo njl
impermeability Good; Ulime uqine elungileyo, umyinge zobude kunye nozinzo ubungakanani ezino afaneleke kakuhle ukufiphala zeendawana zonakalisa; SBS ukulungiswa itha inwebu esixhotyiswe ngokukodwa ayisetyenziswa kwindawo ebandayo kunye kubushushu obuphantsi, lo gama APP kancincane ngebhitumene inwebu lisetyenziswa kwindawo eshushu kunye lobushushu eliphezulu; beqhuba kakuhle anti-okuhlatywa, anti-broker, anti-ukuxhathisa, anti-ukhukhuliseko, anti-nangexoshomba, anti-yemozulu; Ulwakhiwo okufanelekileyo, indlela anyibilike unako ukusebenza onyaka amane, amalungu zithembeke
Ngu- bani ipholiyesta G Glassfibre PYG Glassfibre ukuphucula ipholiyesta waziva PE PE Film S Sand
Kufanele ukuba kwakhiwe yoluntu nophahla, phantsi komhlaba, ibhulorho, yokupaka, ichibi, kwitonela kumgca amanzi kunye dampproof, ingakumbi isakhiwo phantsi lobushushu eliphezulu. Ngokutsho kwe umgqaliselo nophahla zobunjineli, APP kancincane ngebhitumene inwebu zingasetyenziswa kwi-Grade Ⅰ isakhiwo yoluntu yokwakha ethandwayo eye imfuneko ngamanzi okhethekileyo.
imiyalelo Ukugcinwa nokuthuthwa
Xa ukugcinwa kunye nokuthuthwa, iintlobo ezahlukeneyo kunye ubukhulu iimveliso ziya ingqokelela ngokwahlukileyo, akufuneki ihlale. Lobushushu yokugcina kufuneka ibe ngaphezulu 50 ℃, ukuphakama akukho maleko angapha kwesibini, ngexesha zokuhamba, inwebu umele ukuma.
Ukuphakama ingqokelela akukho maleko ngaphezu ezimbini. Ukuthintela ukuthambeka okanye uxinzelelo, xa kuyimfuneko cover le kwakungcono laphu.
Xa iimeko eqhelekileyo ukugcinwa kunye nokuthuthwa, ixesha zokugcina ngonyaka ukusukela kumhla yemveliso
SBS [Ukuqinisekisa ukuba GB 18242-2008]
Umxholo awonayo / (g / m ²) ≥
Akukho flow, akukho ankconkcozayo
kubushushu obuphantsi nezimo / ℃
Impermeability imizuzu 30
/ (N / 50mm) ≥ Ubuninzi
Akukho sihlwahlwaz, kungekho ngaphandle
Ubuninzi /% ≥
: Previous New Fashion Design for Sbs Bitumen Pvc Waterproof Membrane
Okulandelayo: APP itha modified ndizayo
App Kulungiswe ibhitumene ndizayo Price
App Modified zingangenwa ibhitumene ndizayo
Kulungiswe lyu zingangenwa
Acrylic Ukwaleka okungangenwa, Amanzi Base lyu Ukwaleka ngamanzi , Tpo ndizayo okungangenwa, Single-sangqa zophahla ndizayo , lyu Ukwaleka Kuba eziphathekayo , Flexible Polymer-Cement Ukwaleka ngamanzi ,
lyu Ukwaleka Kuba eziphathekayo , Tpo ndizayo okungangenwa, Amanzi Base lyu Ukwaleka ngamanzi , Acrylic Ukwaleka okungangenwa, Flexible Polymer-Cement Ukwaleka ngamanzi , Single-sangqa zophahla ndizayo ,